Nchịkọta ịde blọgụ nke Blogconomy | Martech Zone
Cheta mgbe ndi bekee na ekwu na ịde blọgụ bụ nwụrụ anwụ? Anọ m na-ede blọgụ ugbu a ruo afọ iri ma nwee ihe ịga nke ọma, akwụkwọ m, ụlọ ọrụ m na ọrụ m na ịde blọgụ. N'ime ọtụtụ afọ nke ịde blọgụ, enwere m ikike, ikike na ihe zuru ezu nke na-esote na anyị nwere ike ịkwagide azụmaahịa na-eto eto na-enyere ndị ahịa anyị aka ịgbalịsi ike ịre ahịa ha. Anaghị m ekwu maka uru ọ bụla - M na-aga n'ihu na-erite uru!
Nke a bụ nnukwu nnyocha nke Ego by Wepu Isi. Ha enweela ndụmọdụ siri ike na post ha - blog kwa izu, dee ọdịnaya bara uru, nwee oku na-aga mgbe niile, ma nwee akwụkwọ ozi email iji jide ndị debanyere aha. Dị ka ụlọ ahịa ọ bụla ọzọ, mbọ ị na-agba na-arụpụta nsonaazụ metụtara. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere ike biputere kwa ụbọchị - site na akụkọ ndị ahịa, iji okwu ikpe, na akụkọ ụlọ ọrụ na ndụmọdụ ụlọ ọrụ - ị nwere ike ịga ebe ahụ ngwa ngwa!
Tags: ịde blọgụnchịkọta ederedeụlọ ọrụ ịde blọgụ
Nov 12, 2013 na 4:22 AM
Mee oru gi ime ulo gi, ihe omume gi
anyị na-aza ajụjụ ihe omume ụlọ akwụkwọ na-enye aka na nkuzi nkuzi. Nke anyi
oru omume na-enyere gị aka ime gị ajụjụ omume n'ụlọ na ajụjụ
Biko gaa otu ugboro http://www.homeworkhelpindiadotcom